Qeybtii 24-aad Sheekooyinka lagu soo halqabsado ee murti ahaanta loo isticmaalo
Beri baa labo nin oo nacasyo ah waxay ku fekereen intay meel fariisteen oo iska ahamiyeen, waxay jeclaan lahaayeen inay ka shaqeystaan, ayey marba xirfad soo qaadeen, maya maya sidii ay u lahaayeen ayuu mid ka mid ah yidhi hebelow haddii aan beer weyn falan lahayn oo ilaaheyna xilligu barwaaqo nooga dhigi lahaa oo markaas badar badan nooga bixi lahaa .
Marka aan badarkaas goosano ee aan dhibta ka nasano soorna nalooga sameeyo xeeradii soorta ahayd oo sixin iyo caano lagu iidaamay naloo keeno soorta ayaan markaas ku bur goosan lahayn, maya ee kii kale ayaa yidhi weaan fadooqaneynaa, maya ee waan bur goosaneynaa … maye ee wallaan kaa yeelin. Labadoodii halkii ayey feer iyo haraati isku bilaabeen oo dhaawacyo xun-xun iskgaarsiiyeen.
Sheekadiina halkaa ayey ku dhamaatay
Beri baa waxaa aad u macluulay oo saboolnimadu ay daashatay laba nin oo bakhaylo ahaa, markii dambe ayey Ilaahey baryeen oo yiraahdeen Ilaahayow adduunyo wan ku dhibtoonee sida noo dhaan. Maalmo kadibna Ilaahey ducadoodii wuu ka aqbalay, waxaana malag loo soo diray intuu maalin u yimid uu ku yiri “ilaahey ducadiinii wuu idinka aqbalay, waxaana la idinsiiyey hal duco oo aqbal ah, ninkii ku duceeya ducadaas intuu hele ayuu kan aamiin yiraahdana labadeed helayaa. Waxaadna fursaddaa aqbalaadda ah haysataa ilaa qoraxdu ka dhacdo.
Labadii nin baa waxay bilaabeen inay isku qabsadaan adigu ducee aan aamiiniyee, iyo adigu duceen anaa aamiin dhehee’. Isagoo qof kasta rajo ka qaba in saxaabkii inta uu helo labajibaarkeed uu helo. Siday isu jii-jiidanayeen ayey qoraxdii gaabatay, ugu dambeyntiina mid baa ku dhiiraday inuu duceeyo, wuxuuna yiri ilaa hayow hal il I tir, isla markiina Ilaahey wuu ka aqbalay oo ilbuu beelay, kii kalena Aamiin buu yiri oo labadiiba wuu belay” isagoo usha u haya ayuu hogaamiyey oo tuuladii uu geeyey.
Qeytbtii 23-aad halkaan ka Aqriso